Rep Power 10 SAFETY Start With ME
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to phoeko For This Useful Post:
Ko-Naing, NayNyo, William Paul 05-09-2010 11:10 AM
Rep Power9SAFETY Start With ME
GENERAL SAFETY PRECAUTIONS GENERAL SAFETY PRECAUTIONS ကနေရာတိုင်းမှာ လိုအပ်ပါတယ်။
Ko-Naing, shangyi, William Paul 05-09-2010 12:56 PM
Rep Power9ပြန်စာ -> SAFETY Start With ME
လက်တွေ့အလုပ်ခွင်မှ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ အတတ်ပညာရှင် အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့၊ ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်တခုကို၊ ဖွင့်လှစ်တာမို့ ဝမ်းသာအားရကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီမှာတော့ သတိပေးမှု၊ ပညာပေးမှု၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ကြားကနေ Construction Sector နဲ့ Shipyard တွေမှာ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေအများဆုံးဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Marine Related Field က အပိုင်းကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to ကိုထွန်း For This Useful Post:
shangyi, William Paul, Zarni234 05-30-2010 08:42 AM
Rep Power0ပြန်စာ -> SAFETY Start With ME -> Take-5 ( Keppel shipyard )
လို့ အဓ္ခိပါယ်ရတယ်( တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ရေးတာပါ.. မှားရင် ပြင် ဖတ်ကျနော်) နောက်နေ့တွေကျရင် အဲဒါတွေကို တစ်ခု ခြင်းစီ ရှင်းပြပေးမယ် နော် Reply With Quote The Following4Users Say Thank You to zzaung.bem For This Useful Post:
NayNyo, shangyi, William Paul, Zarni234 05-30-2010 09:35 AM
Reply With Quote The Following User Says Thank You to ကိုထွန်း For This Useful Post:
William Paul 08-04-2010 02:16 PM
Posts 145	Thanks 2,839
Rep Power0Re: SAFETY Start With ME
ကျွန်တော်တို့ Engineering လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ Safety ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ Safety နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တိကျတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ တိကျတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြတ်မှုတွေ နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းစေရေး ဆောင်ရွတ်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ Singapore မှာတော့ National Safety Council Of Singapore ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို 1st July 1966 ကစတင်တည်ထောင်ပြီးတော့ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Home Safety ၊ Workplace Safety and Health နှင့် Road Safety ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေခွဲ ပြီး Safety လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းက နေပြီး Safety နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်တန်းတွေလဲ ပေးပါတယ် ။ Singapore မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင် အခြေခံသင်တန်းဖြစ်တဲ့ Construction Safety Orientation Course (CSOC) ကိုအရင် သင်တန်းပေးပါတယ်။ Construction Site Engineer လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Building Construction Supervisor Safety Course (BCSS) ကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာ တက်ရတယ်ဗျ။ Company အများစုက ဒီလိုသင်တန်းတက်ဖို့ အတွက် စရိတ်ကျခံတာများပါတယ်။ တချို့ Office ပိုင်းလုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ Company ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပေးပြီးတက်ကြပါတယ်။ တခြားဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာအပိုင်းတွေကိုတော့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး တက်ရောက်ရပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကပေးတဲ့ Safety Course တွေကတော့
5. Building Construction Supervisor Safety Course (BCSS) 6. Shipyard Supervisor Safety Course (SSSC)
Reply With Quote The Following5Users Say Thank You to pigkalay For This Useful Post:
HarryLwin, NayNyo, shangyi, William Paul, ကိုထွန်း 10-18-2010 10:10 AM
Reply With Quote The Following 8 Users Say Thank You to pigkalay For This Useful Post:
HarryLwin, Ko-Naing, shangyi, U Kyan Taing Aung, William Paul, Zarni234, ကိုထွန်း, နေမင်းသွေး 08-23-2012 07:11 AM
Posts 27	Thanks 51
Rep Power0အရမ်းကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါ
ကျွန်တော်က ဖိုရမ်မှာ မရှိသေးဘူးထင်လို့ တင်မလို့လုပ်နေတာ ခုရှာကြည့်တော့မှ တော်တော်လေးကိုခရီးရောက်နေပြီဆိုတာသိရတယ် တစ်ကယ်ကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက အဲဒီအပိုင်းမှာ အများကြီးကိုအားနည်းနေသေးတာတွေ့ရတယ်
ကျွန်တော်ခုလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်လည်း ဒီနိုင်ငံမှာ အတော်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပါ နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီး ကန်ထရိုက်ယူဖို့ထိတောင်စဉ်းစားနေတဲ့အဆင့်ပါ ဒါပေမယ့် ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ အားနည်းတာမှ လုံးဝကြီးကိုအားနည်းတာ။ Safety incharge ဆိုပြီးခန့်တာ နှစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်
Reply With Quote The Following9Users Say Thank You to komyogyi.pyi For This Useful Post:
chit tee, pazflor, phoeko, pigkalay, shangyi, tunaungkyaw, William Paul, ကိုထွန်း, နေမင်းသွေး 12-14-2012 05:23 PM
Rep Power0Tool box Meeting ဆိုတာလား အစ်ကိုရေ
Reply With Quote 12-26-2012 03:29 AM
Rep Power0Cause Tree Analysis
သာမန်ကြည့်ရင် သိပ်အရေးမပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ တကယ်အသုံးချတတ်ရင် အကျိုးများမဲ့ နည်းစနစ်လေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ဟာ Risk analysis နဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ဆင့်ရှိသူတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်းတော့ စကားခံထားပါရစေ။ ဒါပေမဲ့ မသိသေးသူများအဖို့ အခြေခံသဘောတရားအချို့ကို နားလည်စေလိုရင်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အရင်လုပ်မှာ HSE နဲ့ပက်သက်ပြီး လုပ်ရပါတယ်။ Management level တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီ စည်းကမ်းအရ ကျွန်တော် basic level တော့သင်တန်းတက်ဖူးပါတယ်။ နောက်ဆိုဒ်ထဲမှာ လူကြီးက သင်တန်းပေးတဲ့ အခါ ထပ်နားထောင်၊ ဆိုဒ်ထဲမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အသေးစား မတော်တဆမှူ့လေးများ နဲ့ ပက်သက်ပြီး analysis လုပ်တဲ့အခါ ၀င်တက်၊နားထောင် ဖူးတာလောက်ပါဘဲ။ ရည်ရွယ်ချက်
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှူ့များရဲ့  အကြောင်းအရင်းအမြစ်ကို နားလည်သိရှိ သဘောပေါက်ဖို့နဲ့ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးနောက်ထပ် မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်စီမံကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ မတော်တဆမှူ့များနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာဖြစ်ဖြစ် မတော်တဆမှူ့များ ဖြစ်ပွားတတ်ကြတာ အားလုံးအသိပါ။ မတော်တဆမှူ့တွေဖြစ်လာရင် လူတွေအသက်ဆုံးရှူံးနိုင်တယ်၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါများဆုံးရှူံးကာ လူစဉ်မမှီဖြစ်နိုင်တယ်၊ သဘာပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှူ့တွေရှိနိုင်တယ်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှောင့်နေးကြန့်ကြာမှူ့တွေ၊ ငွေရေးကြေးရေးဆုံးရှူံးမှူ့တွေ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှူ့များပြုလုပ်စေခြင်းပါဘဲ။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ လုံလောက်တဲ့ အစီအမံ စည်းကမ်းဆိုင်ရာများချမှတ်ထားရပါမယ်။ လိုအပ်ချက်များကို လည်းစီမံခန့်ခွဲသူများက ထောက်ပံပေးထားရပါမယ်။ မတော်တဆမှူ့များဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင်လည်း လိုအပ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှူ့များကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများဟာ ကံကိုအလွန်ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မတော်တဆမှူ့တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင် “ဒီလူ ကံဆိုးတယ်ကွာ၊ ဒီလူတော့ ကံကောင်းလို့ သီသီလေးလွတ်သွားတယ်” စသဖြင့်ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကံကိုယုံတာ၊မယုံတာကို ကျွန်တော်ထောက်ပြလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကံဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက်မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွေးခေါ်စဉ်းစားပုံကို ဒီ ကံဆိုး၊ကံကောင်းဆိုတဲ့ ကိုယ်မသိမြင်နိုင်တဲ့ အရာကြီး မှာရပ်လိုက်ကြမှာလားလို့ရယ်ပါ။ ဒီနေရာမှာ လက်တွေ့ကျတဲ့ အယူအဆကိုကြည့်ရအောင်ဗျာ။ “Accidents are not caused by chance, inevitability or bad luck.”
ဒီတော့ မတော်တဆမှူ့ဆိုတာ လူကြောင့်၊ ပစ္စည်းကိရိယာချွတ်ယွင်းမှူ့ကြောင့်၊ သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှူ့ဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှူ့ကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့ ယူပါတယ်။ ဒီတော့ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုရှာပါတယ်။ နောက်မဖြစ်ရအောင်စီမံပါတယ်။ ဒီတော့ နောင်မှာ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်နိုင်စွမ်းနည်းသွားပါတယ်။ CTA ကိုလုပ်ဆောင်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မတော်တဆဖြစ်ရပ်များရဲ့  မူရင်းအကြောင်းအခံ ကိုစူးစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက ရလာတဲ့ အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး နောင်မဖြစ်ပွားအောင် ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲ မလည်းဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းစနစ် CTA ကိုအောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်သွားရပါမယ်။
မတော်တဆမှူ့ တစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဖြစ်ရပ်အကြီးအသေး သက်ရောက်မှူ့ပေါ်မူတည်ပြီး CTA လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်ဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ ဆိုင်ရာပေါ်လစီများရှိတတ်ကြပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ severity level ပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။ စလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်၊ဘယ်နေရာ၊ဘယ်သူ တွေပါဝင်ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ခပ်မြန်မြန်စသင့်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေ မမေ့ပျောက်သွားခင်မှာ စသင့်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနပေါင်းစုံမှ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်ကြရပါမယ်။ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားစဉ် ကိုယ်တွေ့ကြုံသူ၊ မျက်မြင်သက်သေ များကတော့ မပါမဖြစ်ပေါ့။ နောက် HSE ဌာနကသူတွေကတော့ ညှိူနှိူင်းရေးမှူး (facilitator) အနေဖြင့် CTA ကို ဦးဆောင်ရပါတယ်။ ဆိုဒ်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ရုံးချုပ်က လူကြီးများလည်း မဖြစ်မနေပါကြရပါတယ်။ အဆိုပါ လူကြီးများကသာ CTA အပြီးထွက်လာတဲ့ အချက်များပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ CTA မစမီ လူစုပြီး အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာ၊ အနေအထားကို သွားရောက်လေ့လာကြရပါတယ်။ ဒါအပြင် ဆိုဒ်ဘက်မှ အခင်းဖြစ်ပြီးပြီးချင်းတင်ရတဲ့ incident report ကိုကြိုတင်ဖတ်ရူ့ထားကြရပါတယ်။ အထက်ပါအခြေအနေတွေ အားလုံးစုံပြီဆိုရင်တော့ CTA စလို့ရပါပြီ။ ဦးစွာ အချက်အလက်တွေ စစုဆောင်းရပါမယ်။ ရနိုင်သမျှ အချက်အလက်တွေကို ၀ိုင်းဝန်းအဆိုပြုကြရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ သဘောတရားတစ်ခုကို သတိထားရပါတယ်။ အဆိုပြုတင်ပြရာမှာ အချက်အလက်၊ အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံမူ့ရှိရပါမယ်။ ထင်မြင်ချက်၊မှန်းဆချက်များ ဖြစ်မနေရပါဘူး။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာ ကရိန်းမောင်းနေရင်း ပစ္စည်းများထွက်ကျတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဥပမာအနေနဲ့ ကြည့်ရအောင်။ တစ်ယောက်ကဆိုပါလိမ့်မယ်။ “အဲ့နေ့က ကရိန်းမောင်းနေတုန်း လေအရမ်းတိုက်နေသည်”
ဟု အဆိုပြုကောင်းပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ထင်မြင်ချက် အနည်းငယ်ပါနေပါတယ်။ “အရမ်း” ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ယူဆချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာက “အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်က လေ တစ်နာရီ မိုင်၃၀ နှူန်းတိုက်နေသည်” စတဲ့ တိကျတဲ့ အချက်ကိုသာဆိုရပါမယ်။ ဒီပထမအဆင့်မှာ အားလုံးဝိုင်းဝန်း အဖြေရှာစဉ်းစားကြရပါတယ်။ (brainstorming) ၂။ ပုံစံငယ်တည်ဆောက်ခြင်း
ရလာတဲ့ အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ပုံစံငယ်ကို အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ရပါမယ်။ cause tree လို့ဆိုတဲ့ အတိုင်း သစ်ပစ်တစ်ပင်လို့ အကိုင်းအခက်တွေခွဲဖြာသွားပုံနဲ့ တင်စားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နောက်ပြန်စဉ်းစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ သွားပါတယ်။ အထက်ပါဥပမာ အတိုင်းဆက်သွားရရင် ကရိန်းနဲ့ သယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေပြုတ်ကျတယ်။ ဘာလိုကျတာလည်းဆိုရင်၊ ဒီ ကရိန်းထဲမှာ ပစ္စည်းတွေထည့်သယ်လာလို့၊ ကရိန်းကိုမောင်းနှင်ရလို့ ၊ကရိန်းမှာသုံးတဲ့ချိတ်မခိုင်လို့ စသဖြင့် အဖြေထွက်ပါမယ်။ အဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုကိုမေးရပါမယ်။ ဒါတွေကတော့
“Is it necessary?” နဲ့ “Is it sufficient” တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရဲ့ လား ၊ လုံလောက်ရဲ့  လားလို့ဆိုရပါမယ်။ ကရိန်းမောင်းနေရင်း ပစ္စည်းတွေပြုတ်ကျတယ်ဆိုရာမှာ ကရိန်းထဲမှာ ပစ္စည်းတွေမရှိရင်၊ ကရိန်းကိုသာ မောင်းနှင်အသုံးပြုခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်၊ ကရိန်းမှာသုံးတဲ့ ချိတ်သာကောင်းမယ်ဆိုရင် အထက်ပါ မတော်တဆမှူ့ဟာဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ Ref:Cause Tree Analysis "Facilitator" Training by Faral
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to pazflor For This Useful Post:
komyogyi.pyi, pigkalay, ကိုထွန်း + Reply to Thread